Suuriya: Qarax ka dhacay Azaz oo fallaagadu gacanta ku hayso - BBC News Somali
Suuriya: Qarax ka dhacay Azaz oo fallaagadu gacanta ku hayso
Wararka la helayo ayaa sheegaya in ugu yaraan 14 qof dhinteen ka dib markii baabuur ku qarxay magaalada fallaagadu gacanta ku hayso ee Azaz ee dalka Suuriya una dhaw xadka dalkaasi la leeyahay Turkiga.
Qaraxu wuxu ka dhacay dhisme maxkamadeed oo ku yaal magaalada hortiisa, waxaanay magaaladaasi 7 km u jirta xadka Turkiga.
Azaz waxa dhawaan weeraray kooxda la baxday Dawladda Islaamka.Waxa qaraxani dhacay iyadoo ay dalka ka hirgashay xabbad joojin ballaadhan oo ay ka odayeeyeen Ruushka iyo Turkigu, waana la dhaqan geliyey in kasta oo ay jireen xad gudubyo faro ku tiris ahi.
Ilaa haatan ma cadda cidda ka dambaysa qaraxan maanta dhacay, oo sida wararka qaarkood sheegayaan ay suurto gal tahay in ay ku dhinteen dad ilaa konton qof gaadhayaa in kaloo badanina ku dhaawacmeen.
Magaalada waxa degan kumanaan dad ah oo ka soo bara kacay gobolka magaaladu ku taal intiisa kale.